Ogaden News Agency (ONA) – Hoggaamiyaha Catalonia oo Maxkamaddi Xukuntay Inuu Dalka Kusoo Laabto
Hoggaamiyaha Catalonia oo Maxkamaddi Xukuntay Inuu Dalka Kusoo Laabto
Maxkamadda Dastuuriga ee wadanka Spain ayaa u sheegtay hogaamiyaha gooni-goosadka ah ee Gobolka Catalan Carles Puigdemont, in loo dhaarin karo oo keliya xilka madaxweynaha Gobolkaasi haddii uu kasoo laabto safarka baxsadka ah ee uu dalka uga maqan yahay.
Kadib kulamo dhowr ah oo ka dhacay magaalada Madrid, ayaa maxkamaddu waxa ay xukuntay in Puigdemont ay qasab tahay in uu shaqsi ahaan kasoo hor muuqdo baarlamaanka Catalan, rasmi ahaana aan loo magacaabi Karin xilka madaxweyne inta uu ku sugan yahay dalka Belgium.
Hoggaamiyaha gooni-goosadka Carles Puigdemont ayaa wajahaya eedeymo ah khayaano qaran iyo fallaaganimo uu ku abuurayo dhaqdhaqaaq madax banaan, waxaana uu wajihi doona xadhig hadii uu kusoo laabto wadanka Spain.
Carles Puigdemont, ayaa xiligan la jooga ah musharaxa keliya ee xilka madaxtinimo ee Gobalka Catalan. Xaflada dhaarinta xilka madaxweyne ee Catalan ayaa lagu wadaa in ay dhacdo maalinta salaasada ah ee fooda inagu soo heyso.